Waftigii Madaxwayne Siilaanyo Hogaaminayay Oo Saakana U Baxay Magaalada Laascaanood Iyo Ujeedada Socdaalkooda |
Waftigii Madaxwayne Siilaanyo Hogaaminayay Oo Saakana U Baxay Magaalada Laascaanood Iyo Ujeedada Socdaalkooda
Hargeysa(GNN)-Wararka naga soo gaadhaya magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar soona gaadhaya xafiiska warqabadka shabakada Gabileynews ayaa sheegaya in xalay ay magaalada caynaba u hoy’deen waftigii uu hogaaminayay madaxwaynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Waxaana waaftigani oo uu hogaaminayo madaxwayne Siilanyo ayna kamid yihiin badiba golahiisa wasiiradu ayaa waxa la sheegay inay shalay galinkii danbe gaadheen magaalada caynaba halkasi oo ay ku nasteen xalayna ay seexdeen.
Waftigan ayaa saaka waabarigii sida naloo sheegay u jarmaaday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool,waxaana ujeedada waftigani ku tageen magaalada laascaanood ay tahay inuu madaxwaynuhu xadhiga ka jaro daah furka bilowga diiwaangalinta codbixiyayaasha oo ka bilaabmaysa gobolka sool.
Waxaana sidoo kale la filayaa inuu madaxwaynuhu kulan la qaato madax-dhaqameedka gobolka sool iyo siyaasiyiintii ka socday kooxda Khaatumo ee wada hadalka la furay dawlada Somaliland.
Goordhaw waxaan idin soo gudbin doonaa qaabkii magaalada laascaanood loogu soo dhaweeyey waftigii madaxwaynaha.